Dhacdada saadaasha hawada ee saddexda qorrax | Saadaasha Shabakadda
Saddex qorrax cirka!
Saddex qorraxood oo Ruushka ah
Maya, kamahadleyno laba qorraxood oo kale oo soo muuqda, laakiin waa dhacdo saadaasha hawada oo dhacda marar badan laakiin, si kastaba ha noqotee, waa arrin aan la dareemin tan iyo, sidaan ognahay, midna waa inuusan si toos ah u eegin xiddigta qorraxda maadaama ay dhaawici karto aragtidayada.
Saddexda qorraxood waa hal tusaale oo dheeri ah oo ah sida dabiiciga aan caadi ahayn u yahay, iyo ... sidoo kale intee in le'eg ayuu awoodda maskaxeed ee aadane, taas oo naga dhigi kartaa inaan rumaysanno in maraakiibta ka baxsan dunida ay noo yimaadaan. Xaqiiqdii waa fikrad soo jiidasho leh oo badan oo naga mid ah (oo aan ku jiro aniga), laakiin nasiib daro maahan. Si kastaba ha noqotee, Weli waa indho indheyn xiiso leh oo si xoog leh u soo jiidaneysa dareenkeena.
Daruuraha dhexdooda waxaa ku jira kristantarro yaryar oo yaryar. Iftiinka qoraxda, marka ay isku dhacaan, wuxuu soo saaraa saamayn indhaha oo loo yaqaan parhelion taasoo naga dhigaysa inaan u maleyno in xiddiggu tarmay. Inkasta oo waxa ugu caansan uu yahay in »labada qorraxood ee kale» ay u muuqdaan 22º meel ka baxsan labada dhinac ee Qorraxda (sida aad ku arki karto sawirka madaxa u ah maqaalka), iyaguna waxay u muuqan karaan kuwo aad isugu dhow, sameysmaya nooc saddexagal ah oo aad u yar dherer
Waxay mararka qaarkood la socdaan waxa loo yaqaan halos, kuwaas oo xusuusinaya qaansoroobaadyo u muuqda inay ku wareegsan yihiin qorraxda loona sameeyay si la mid ah saamaynta ugu weyn ee maanta. Kuwani waxay u muuqdaan kuwo badan meelaha qabow ee Dunida, laakiin haddii aad ku sugan tahay deegaankaaga xilliga qaboobaha heerkulku aad buu u hooseeyaa, sidoo kale waad ku raaxeysan kartaa quruxdooda.
Saddexda qorraxood ayaa laga soo qaaday meelo kala duwan oo meeraha ah, iyo kuwo kale: Argentina, Shiinaha iyo qaybo badan oo Yurub ah. Markii ugu dambaysay waxay ahayd magaalada Ruushka ee Chelyabinsk bishii Febraayo 17, halkaas oo waa hubaal inay la yaabeen iyaga oo arkaya.
Adiguna, weligaa ma awoodday inaad u fiirsato dhacdadan? Sideed u aragtaa
Saddex qorraxood Shiinaha
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Saddex qorrax cirka!
Diisambar 16, 2015 saacadihii subaxnimo ifafaalahaan ayaa lagu arkay xaalad celcelis ahaan heerkulka sanadlaha ahi u dhexeeyo 23 ° ilaa 30 °, saddexda qorraxood ayaa la arkay oo ay weheliyaan qaanso roobaad rogaal celis ah
Jawaab ku sii ignacio pasrano
Agoosto 05, 2016 ifafaalaha parhelion waxaa lagu soo bandhigay magaalada Plato Magdalena (Kolombiya) waxaanna ku dhownahay aaga Equatorial oo aad dhif u ah in la arko bandhigan, laakiin qurux badan
Ku jawaab Carlos Casas
Waxaan u maleynayaa in maraakiibta shisheeye aysan wax shaqo ah ku laheyn qodobkaan iyo inaan xaqiijiyo inaysan jirin, mid waa inuu u furnaadaa dhammaan fursadaha, haddii kale fiicnaan.
Dabka San Telmo: waa maxay?